China Ibhedi elula Windsor Bed Igumbi okulala Igumbi lokulala Princess Ibhedi # 0114 ukwenziwa kunye nefektri | Yamazonhome
Ibhedi elula yeWindsor Solid Wood Bedroom Bed Princess Princess # 0114
Inombolo yomzekelo: Amac-0114
Ubukhulu: 1980mm * 2120 * 980mm
Windsor backrest iinkuni okuqinileyo ukhuko
Uyenza njani igumbi lokulala elihlaziyayo nelinokuphefumla? Utshintsho luqala ekukhetheni ibhodi enentloko emise okomtya. Umandlalo wonke wenziwe ngomthi oqinileyo. iiphaneli ezisekwe ngomthi? Ngobuqaqawuli? Akukho namnye kubo okhoyo, iibhedi zomthi eziqinileyo ezinokusingqongileyo, ukuze uzisebenzise ngokuzithemba. Eyona nto iphambili yi-oki, kwaye ungonwabela ubume bendalo kunye nokuguda okukuko macala onke. Akukho livumba likhethekileyo, kwaye ivumba elikhanyayo leplanga liyaphuphuma, likunike imvakalelo yokuphumla kwihlathi eliluhlaza.
Iibhodi zebhedi eqinileyo zomthi zithwala ubunzima
Ukuqina kom-oki kulungile kakhulu. Ayikhange ipeyintwe okanye ifakwe iblitshi ngaphambi kokushiya umzi-mveliso, ukuze ulale ngoxolo. Ibhodi nganye yebhedi icwangciswe ngokuqinileyo, ngenkqubo ye-tenon kunye ne-tenon, eyonyusa kakhulu amandla enkxaso kwibhodi yebhedi. Umzimba wonke upolishiwe ngononophelo ukuzisa ifanitshala ebuthathaka kwaye egudileyo kuwe. Akukho zi-barb, kwaye ubuhle bendalo bokhuni lweenkuni bugcinwa kakhulu, ukuvumela ukuba ubuva ubuhle bendalo ekhaya.
Ukuphakanyiswa komgcini ekupheleni kwebhedi
Umphezulu webhedi kunye neenyawo zebhedi zilungisiwe ngesakhiwo esikumgangatho ophezulu sehardware ukuqinisekisa ukuba umandlalo wokhuni olomeleleyo akukho lula ukushukumisa. Idityaniswe nemilenze yebhedi, ishenxisa uvakalelo olunzima kwaye inamandla kunye nobuhle. Sipholishe ikona nganye ukuba ibe ngqukuva kwaye igude ngaphandle kweebreyithi. Umgangatho ophezulu wehardware Akusayi kubakho ngxaki zinjengomhlwa, ingxolo, njl, njl.
Inxalenye enye yemilenze eshinyeneyo
Inxalenye enye yeenkuni eziqinileyo zemilenze ye-cylindrical, i-angle ye-inclical angle angle, ethwele ngakumbi umthwalo. Ezantsi kunephedi evaliweyo, ekulungeleyo ukuba ihanjiswe, kwaye ayivelisi sandi, kunciphisa ukungqubana kokungqubana komgangatho wakho kunye nemilenze yokulala, kwaye yonyusa ubomi benkonzo. Ifakwe i-Windsor backrest eyenza indawo yonke icace kwaye ilula, kwaye ayizukuthintela iphepha lakho lodonga.
Shiya indawo yokugcina eyaneleyo ezantsi
Ibhedi ephezulu yenziwe nge-oki emhlophe eshinyeneyo, ezinzileyo kwaye eqinile, eyenza ibhedi yonke yomelele. Ukuphakama okwaneleyo emhlabeni kunokwenza ukuba indawo engezantsi ifumaneke. Beka iibhokisi zokugcina kunye nezihlangu ezimbalwa, kodwa ayikhuthazwa into yokuba uyigcwalise. Oku akuyi kulungela ukungena komoya koomatrasi. Yandisa umandlalo otyebileyo kwaye onethezekileyo ukwenza ukuphakama kokulala okutofotofo, kwaye unokufikelela kwizinto kwitafile esecaleni kwebhedi ngokufikelela.
Egqithileyo I-White Oak enemisebenzi emininzi yokulala iibhedi eziqinileyo zegumbi lokulala # 0113
Okulandelayo: I-China Factory i-8M 10M enemibala eQulunqileyo yoMoya oQhelekileyo wePhuli yokudada i-Yoga Mat 0395
Ukukhanya kweNordic Luxury Luxury Furniture Ilaphu # ...
Nordic oki emhlophe oki eqinileyo iinkuni ezincinci ap ...
Wooden Deluxe Ephakanyisiweyo Cat House ngevaranda kunye ...